प्रहरीले लखेट्दा छतबाट लडेर मृत्यु,घटना शंकास्पद छ : पिडित ( घटनाको पूर्ण बिवरण सहित )::त्रिशुलीखवर
प्रहरीले लखेट्दा छतबाट लडेर मृत्यु,घटना शंकास्पद छ : पिडित ( घटनाको पूर्ण बिवरण सहित )
काठमाडौँको नंया बसपार्कमा प्रहरीले लखेट्दा घरको छतबाट लडेर एक युवाको मृत्यु भएको छ । नुवाकोट तादी गाँउपालिका वार्ड नम्बर ६ नर्जामंडप घर भएका २१ बर्षिय ललित तामाङको मृत्यु भएको हो । उत्त घटना चैत्र ३० गते राति करिव १२ बजे घटेको थियो ।
काठमाडौं नयाँ बसपार्कस्थीत मित्रनगरमा रहेको फेसबुक दोहारी साँझमा झगडा गरेर तोडफोड गरेपछि उनिहरुलाई Q .R. T. प्रहरीले ललितसहित दुई जनालाई लखेटेका थिए । उनिहरु भाग्दै नजिकै रहेको राप्ती–गण्डकी गेष्ट हाउसमा छिरेका थिए । उक्त दिन नयाँ वसपार्कमा (चैत्र३०–बैशाख १) दुई दिने मेला चलिरहेको थियो । प्रहरीले आफुहरुलाई लखेटेपछि उनिहरु आफुले चिनेको राप्ती–गण्डकी गेष्ट हाउसमा पुगेर ढोका खोल्न भन्दै कराए । मेनेजरले कसले ढोका ढक्ढक्यायो भनेर हेर्दा चिनेको साथी देखेपछि ढोका खोले र सोधे के भयो ?उनीहरु प्रहरीले लखेटीरहेको छ भन्दै छत तिर भागे । साथै उनीहरुको पछिपछि दुईजना प्रहरी पनि तत्काल गेष्ट हाउस भित्र छिरे ।
प्रत्यक्षदर्शी यसो भन्छन् :
प्रहरीले उनिहरुलाई ५तला माथिसम्म लखेटे र पातलो अग्लो उचाई भएको एक जनालाई समाते । फेरी केही सोधपुछ गरी छाडे । अर्को एकजना भागेर तेस्रो तलामा रहेको शौचालयमा लुकेका थिए। प्रहरी अब त गईसकेहोला भनेर उनी माथि छततर्फ लागे तर भर्याङमा पुग्नासाथ तल आवाज आयो । यसको केहीबेरमा प्रहरी माथि छतबाट तल झर्दै थिए । उनलाई भर्याङमा नै समाते र सोधपुछ गर्दै गर्दा अर्को प्रहरीले यो मान्छे होइन भनी छाडेर दुवै प्रहरी तलतिर लागे । उनीहरु करीव ५–७ मिनेटको अन्तरालमा गेष्ट हाउसमा तलमाथि गरेका थिए । माथिबाट तल आउँदा उनी आत्तिएका जस्ता देखिन्थे ।
बाहिर निस्केपछि उनीहरुले भूँइमा रगताम्मे भएर लडिरहेको ललितलाई देखे । त्यो देखेपछि एकजना प्रहरीले यो मर्यो कि मरेन भनेर तीन–चार पटक खुट्टाले हानेर मरीसकेछ भन्दै फर्किए । पीडित भन्छन्- यो घटनामा प्रहरी नै दोषी छन्, कडा छानविन गर्नुपर्छ । अहिले उनको शव पोष्टमार्टमको लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा राखिएको छ । ललितको मोबाइल छतमानै खसेको छ भने उनको हातमा लगाएको घडी पनि छतमानै भेटिएको छ ।
पीडित परीवार भन्छन्,- प्रहरी र ललितबिच केही त भएकै छ । उनीहरु बिच झगडा भएको हुनुपर्छ । जब ललित तल झरे(खसे) तब प्रहरीले टर्च लाईट समेत बन्द गरेर तल झरे । उनीहरुले लखेटेका दुई जना मध्ये ललित छतबाट खसे अर्का एक जनालाई छाडेर प्रहरी किन भाग्यो त ? फेरी लडीरहेको मान्छेलाई उद्घार गर्नुको साटो उल्टै लात्ताले हानेर मरीसकेछ भनेर प्रहरी किन भागे ? यो एउटा शंकाको विषय पनि हो । प्रहरीको कर्तव्य भनेको घाइते होस् या मृतक उसलाई अस्पताल पुर्याउनुपर्छ तर प्रहरीले त्यसो गरेन् । काउन्टरमा रहेका र बाहिर रहेका अन्यलाई बोलाएर उद्धार गर्नुको साटो किन भागे यो गम्भीर विषय हो उनीहरुले भने ।
पीडित परिवार यसो भन्छन्:
बिभिन्न प्रमाणको आधारमा हेर्ने हो भने यो हत्या भएको आशंका सजिलै गर्न सकिन्छ । मृतकका दाई कमान सिंह तामाङले न्युज विहानी डट कमलाई भने, प्रहरीले लखेट्नु, छतबाट खस्नु, प्रहरीले समातेको मान्छेलार्य छाड्नु ,भूँईमा लडीरहेको मान्छेलाई अस्पताल लैजानुको साटो उल्टो लात्तीले हिर्काउनु। त्याँहाबाट भाग्नु र फेरी केही समय पछि दुईजना पठाइ यहाँ को लाश कता गयो भनी सोधपुछ गर्नु संकास्पद छ ।
उनले भने- हामीले ट्याक्सी खोज्दा पाउने प्रहरीले नपाउने ? यो त एक वहाना मात्र हो । घटनास्थलमा त ट्यासी नै जाँदैन, गल्ली भित्र भएकाले करिब १०० मिटर त बोकेर नै ल्याउनु पर्दछ । घटना भएपछि वरीपरी रहेका गेष्ट हाउसमा भएका मान्छेहरु जम्मा भएर ट्याक्सी बोलाएर राती करिब १२ः३० मा विनायक अस्पताल लगेको हो । पछि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा लगियो ।
हवलदारले पटक –पटक कुरा फेरे अर्का आएनन्
यो विषयमा छलफल गर्न बसेको प्रहरी र पीडित पक्षको विचमा छलफल गर्दा घटनामा संलग्न प्रहरी हवल्दारले पटक पटक कुरा बदलेर घटनाको विवरण वताएका थिए । पीडित पक्षले घटनामा संलग्न दुवै प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन पटक पटक माग गर्दा समेत प्रहरीले कुनै वास्ता गरेन र प्रहरीले राईलाई मात्र बोलायो भने श्रेष्ठलाई बोलाएन ।
प्रहरी के भन्छ :
फेसबुक दोहोरी साँझमा झगडा गरी तोडफोड गरेको भन्दै हामीले दुई जनालाई पक्राउ गर्न लखेटेको हो । Q .R. T. का प्रहरी जवान प्रशान्त श्रेष्ठले डिउटीमा रहेका हवलदार किरण राईलाई मद्दत गर्न भनेपछि दुईजना प्रहरी दुई जना व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न भन्दै गेष्ट हाउस भित्र छिर्यो रमाथिसम्म पुग्यो तर उनीहरुले ललितलाई देखेन भने अर्का एक व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लियो ।
तर उनी त्यो व्यक्ति नभएको प्रशान्तले किरणलाई भनेपछि उनलाई छाडे । त्यसपछि फर्कदा भर्याङमा प्रहरीले अर्का एक व्यक्तिलाई सोधे त गाइडहोस् उसले होइन भनेपछि उसलाई पनि छाडेर बाहिर निस्किए । ललित घाइते भइ छट्पटाईरहेको देखेपछि दुवैजना ट्याक्सी खोज्न भनी हिड तर कुनै पनि ट्याक्सीले जान नै मानेनन् र भने हाम्रो वुकिङ भइसकेको छ । छाडेर हिड्नु हाम्रो कम्जोरी हो।
उसलाई अस्पताल लानुपथ्र्यो तर लगेनन् । हामी यो कम्जोरी स्वीकार्छौं । नयाँ वसपार्कका प्रहरी निरिक्षक प्रताव पौडेलले भने, राती मेलाका कारण निकै भिंडभाड थियो ।जसलाई नियन्त्रण गर्न समेत प्रहरीलाई हम्मे हम्मे थियो । मेलामा ६० जना प्रहरी परिचालन गरीएको थियो । मेला राती ३ बजे सम्म चलेको थियो ।
ललितलाई प्रहरीले पहिल्यै नै तीन पटक पक्राउ गर्दै छाड्दै गरेको हो । प्रहरीले ट्याक्सी खोज्न जाँदा कसैले पनि नमान्नुको कारण प्रहरीले पैसा नदिने हो की, थोरै मात्र दिने हो कि भन्ने हुन सक्छ,तर पछि पुग्दा अस्पताल लागिसकेछन्, उनी बताउँछन् । महानगरीय प्रहरी प्रभाग महाराजगंजका प्रहरी नायव उपरिक्षक योगेन्द्र सिंह थापाले भने दोषी जो कोही भए पनि कार्वाही हुने बताए । यो विषयमा छानविन समिति गठन गर्न हेड क्वार्टर नक्शाललाई जानकारी दिइसकेको उनले वताए । आज नै छानविनको लागि पत्र पठाइने जानकारी दिए । यो घटना आकस्मिक हो कि झगडा पछि भएको हो त्यो भने पोष्टमाटम रिर्पोट आएपछि मात्र थाहा हुन्छ, उनले भने ।
उक्त छलफलमा मृतकका परिवारका साथै नुवाकोट क्षेत्र नं. १ का सांसद हित बहादुर तामाङ तथा तादी गाउँपालिका वडा नं. ६ का अध्यक्ष केशव थापालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
भरुवा बन्दुक र धारिलो हतियार प्रहार गरी श्रीमती र छोराको हत्या
डडेल्धुरामा जिप दुर्घटना, दुईजनाको मृत्यु, १५ जना घाइते